सरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएको बिद्यालय की १५ वर्षीय बालिका को कोरोना ले लीयो ज्या’न ! – Life Nepali
सरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएको बिद्यालय की १५ वर्षीय बालिका को कोरोना ले लीयो ज्या’न !
सरकारले जोखीम उठाएर अध्ययन अध्यापन नगराउन दिएको निर्देशन लत्याउँदै परिक्षा संचालन गरीरहेको रुपन्देहीको एक निजी विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएकी एक छात्राको उपचारका लागि अस्पताल लैजादै गर्दा मृ’त्यु भएको छ। तिलोत्तमाको नयाँमिलस्थित प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत १५ वर्षीया प्रतिमा सापकोटाको मृ’त्यु भएको हो । ज्व’रो र पेट दुख्ने समस्या देखिएकी उनलाई शनिबार परिवारका सदस्यले मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थिए । तर अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै उनको मृ’त्यु भयो । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
मृ’त’कका दाजु प्रकाश सापकोटाले बहिनीलाई दुईदिनदेखि ज्वरो आएपनि समयमै उपचार नगराउँदा मृ’त्यु भएको दाबी गरे । ‘हामीलाई कोभिड–१९ संक्र’मणकै कारण मृ’त्यु भएको शंका छ,’ प्रकाशले भने । छात्राको मृ’त्युपछि विद्यालयले होस्टेलमा रहेका विद्यार्थीहरुको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गराएको छ । तर रिपोर्ट आइनसकेको विद्यालयका सहायक प्रिन्सिपल एलडी किराँतले बताए ।।***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
उनका अनुसार छात्रावासमा प्रतिमासँगै ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । ती बालिका स्कुलको छात्रावासमा बसेर परीक्षा दिइरहेकी थिइन्। बालिकासँगै छात्रावासमा बस्ने अन्य बालबालिकाका अनुसार उनलाई दुइ दिन देखि ज्व’रो आएको थियो। तर स्कुलले उपचारका लागि अस्पताल लगेन। गए रातीदेखि ती बालिकाले आफुलाई निकै असहज महसुस भएको साथीहरुलाई बताएकी थिइन्।।***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
बिहान पख अन्य बालबालिकाहरूले होस्टेलका कर्मचारी र शिक्षकसँग उपचारका लागि लैजान कर गरेपछि बल्ल स्कुलले अभिभावक बोलाएर ती बालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो। बालिकाका आफन्तले पनि परीक्षा संचालन गर्ने निहुँमा विद्यालयले बिरामी बालिकाको उपचार नगरी राखेको र परिवारलाई समेत समयमै खबर नगरेको बताए । प्रतिमाको मृ’त्युपछि केही विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Previous पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, दिपावली गरौं
Next मुख्यमन्त्री राईको दाबी : ‘बालिका खड्का मैले चिनेको मान्छे होईन, मसँग कहिल्यै सम्वाद भएको मान्छे होईन’ (भिडिओ)